40 sanno kadib duulimaadkii diyaadareed ee ganacsi oo isku xira Muqdisho iyo Addis Ababa oo bilaabmi doona asbuuca soo socda - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeBusiness40 sanno kadib duulimaadkii diyaadareed ee ganacsi oo isku xira Muqdisho iyo Addis Ababa oo bilaabmi doona asbuuca soo socda
August 15, 2018 Puntland Mirror Business, Somalia 0
National Airways oo fadhida garoonka diyaaradaha Garoowe halkaas asbuucii lasoo dhaafay ay duulimaad ka bilowday. [Sawirka]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Diyaaradii ugu horeysay ee ganacsi oo isku xirta caasimada Soomaaliya ee Muqdisho iyo caasimada Itoobiya ee Addis Ababa ayaa la filayaa in asbuuca soo socda ay kasoo degto garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulle.
Diyaarada National Airways, oo horey loo oran jiray Air Ethiopia, oo ah diyaarad ganacsi oo fadhigeedu yahay Itoobiya ayaa bilaabi doonta duulimaadka asbuuclaha ah ee Addis Ababa iyo Muqdisho, sida Xuseen Xoosh oo katirsan masuuliyiinta diyaaradda uu u sheegay warbaahinta.
Waxay noqon doontaa markii ugu horeysay in ka badan 40-sanno duulimaad ganacsi oo labadaas magaalo isku xira.
Xukuumaddii Madaxweyne Maxamed Siyaad Bare ayaa joojisay diyaaradihii ganacsi ee isku xiri jiray Muqdisho iyo Addis Ababa kadib dagaalkii 1977-dii oo labada dal dhexmaray.
Diyaaradda ayaa sidoo kale sameyn doonta duulimaadyo Muqdisho iyo meel0 kale isku xiri doona, sida uu sheegay Xoosh.
National Airways ayaa asbuucii lasoo dhaafay duulimaadyo asbuucle ah oo isku xiri doona Garoowe iyo Addis Ababa ka bilowday garoonka diyaaradaha Garoowe.
December 19, 2016 Jubba Airways oo duulimaadyo cusub oo isku xiri doona dhowr magaalo ka bilowday garoonka diyaaradaha Boosaaso
March 29, 2018 Shirkada Air Djibouti oo duulimaadyo ka bilaabi doonta Boosaaso
Baarlamaanka Puntland oo meelmariyay in dib loogu noqdo doorashada ku saleysan hab beeleedka
Rookie councilor says he’s running for Garowe mayor
Hassan Sheikh confirm first session of parliament will take place on December 15
Mogadishu-(Puntland Mirror) Somali President Hassan Sheikh Mohamoud has confirmed that the first meeting of Somali parliament will take place on December 15. “The first session of the Parliament will take place on December 15, as [...]
Madaxweynaha Puntland oo afhayeenkiisa u magacaabay wasiir dowlaha cusub ee madaxtooyada iyo xiriirka golayaasha
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa afhayeenkiisa u magacaabay wasiir dowle, sida lagu sheegay digreeto kasoo baxday xafiiska madaxweynaha maanta oo Khamiis ah. Afhayeenka madaxweynaha Cabdullaahi Maxamed Jaamac oo loo yaqaan Quraan-jacel ayaa [...]